June 11, 2019 - ThutaSone
ဆေးတက္ကသိုလ်တက်နိုင်ရန် (၁၀) တန်းစာမေးပွဲ (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မအိမ့်ကလျာခိုင် အလှူရှင်များလိုအပ်နေပါတယ်
June 11, 2019 ThutaSone 0
ဆေးတက္ကသိုလ်တက်နိုင်ရန် (၁၀) တန်းစာမေးပွဲ (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မအိမ့်ကလျာခိုင် အလှူရှင်များလိုအပ်နေပါတယ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင် (၁၀) တန်းစာမေးပွဲ (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မအိမ့်ကလျ ာခိုင်ဆေးတက္ကသိုလ်တက်နိုင်ရန်အလှူ ရှင်မျ ားလိုအပ်နေပါတယ် (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မအိမ့်ကလျ ာခိုင်သည် မိခင် မုဆိုးမကြီး ဒေါ်အမာ နှင့်မုံရွာမြို့ […]
မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် FB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ
မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် FB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ ဖတ်ကြည့်မှ သိမှာမို့ ဖတ်ကြည့်နော့ ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်အချိန်တော်တော်ကြာမှအသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ် အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာ ယောကျ်ားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ် အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောကျ်ားကို […]
Myanmar Idol Season4 …. ပရိသတ်တွေရှေ့ တစ်ကျော့ပြန် ရောက်ရှိလာတော့မယ်
Myanmar Idol Season4 …. ပရိသတ်တွေရှေ့ တစ်ကျော့ပြန် ရောက်ရှိလာတော့မယ် ပရိသတ်များအားလုံးဘဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Myanmar Idol Season-4 မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ့် အကဲဖြတ်ဒိုင်များကတော့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်၊ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဦးအောင်ကိုလတ် တို့က အမှတ်ပေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar idol Season-4၏ အသံစစ်ဆေးမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့ကြီး […]
ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ ယနေ့ ဇွန် ၁၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံတဝန်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် မိုးတိမ်တောင် အခြေအနေ
ကျန်းမာတော်မူကြပါ စခင်ဗျာ ယနေ့ ဇွန် ၁၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံတဝန်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် မိုးတိမ်တောင် အခြေအနေ ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇ ွန်လ (၁၁) ရက်နေ့ အ တ ွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တ ွင်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအလားအလာ။ ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ ရှေ့အလယ်ပိုင်း […]
ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ကအံ့မ ခန်းပါပဲ…… တစ်နိုင်ငံလုံးပထမတဲ့လား
#တနိုင်ငံလုံးပထမတဲ့လား မီးမရှိတဲ့ရွာလေးကနေ လမ်းကြမ်းကိုစက်ဘီးလေးနဲ့ဖြတ် စက်ဘီးနင်းမရတော့တဲ့နေရာရောက်ရင်ခြေလျင်လျှောက် ၁နာခွဲကြာမှကျောင်းရောက်တဲ့ သဇင်ဝင်းဆိုတဲ့ကလေးမ လေးရဲ့ ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ် ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ကအံ့မ ခန်းပါပဲ။ မုန့်ဘိုးတထောင်ကိုတပတ်စာသုံးသတဲ့ကွယ် ဟိုတပတ်ကတီတီစီတက်ဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဆီ အသနားခံ မဲ့သူတွေပြေးမြင်မိတယ်။ ကလေးမလေးရဲ့စိတ်ကူး ရည်မှန်းချက်တွေကလည်း အများအကျိုးထမ်းဖို့ပဲ။ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလိုက်ပါသလဲ။ သားသမီးဘဝကောင်းစားစေချင်ရင် စိတ်ဓာတ် စိတ် […]
ဆင်းရဲသား (ကျောမွဲစစ်စစ်) ဘဝက အရဟံပုတီးစိပ်နည်းကြောင့် ဆန်စက်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ “အရဟံ ဦးဆင်”
ဆင်းရဲသား (ကျောမွဲစစ်စစ်) ဘဝက အရဟံပုတီးစိပ်နည်းကြောင့် ဆန်စက်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ “အရဟံ ဦးဆင်” “ငဆင်— နင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ခုမှ အရဟံ ဂုဏ်တော် ကိန်းတယ် ဟ။နင် ထူးခြားတော့မယ်။ ဆက်ကြိုးစား ကြားလား”(အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး) စစ်ကြီး ပြီးခါစလောက်က မန္တလေးမြောက်ဘက် မတ္တရာနယ်က ပိုင်ရွာ တစ်ဝိုက်မှာတော့ […]